Yugyan Daily » राजधानी भालुवाङको चर्चा चलेको त्यो दिन
सूर्य थापाले भन्नुभयो, प्रदेश राजधानी बन्ने ठाउँ नै भालुवाङ हो । तिमिहरुले कार्यक्रम गरेर भालुवाङको बारेमा चर्चा चलायौ
- शोभाखर पन्थी
असोज २१ गते २०७७
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिले दुई बर्ष पहिले भालुवाङमा आयोजना गरेको मिडिया सम्मेलनमा प्रदेश राजधानी भालुवाङमा नै बन्नुपर्छ भन्ने बलियो आवाज उठेको थियो ।
त्यहाँ उपस्थित नेताहरूले राजधानीको निम्ति भालुवाङ नै उपयुक्त स्थान रहेको भनी मन पग्लाएका थिए । हामीलाई कार्यक्रम राख्नको निम्ति प्रेरित गर्ने मित्रहरू पनि निक्कै खुसि थिए । हामी पनि महान सहिद कृष्णसेन ईच्छुकको भग्नावशेष को रुपमा रहेको निवासमा उहाँको स्मरणमा कार्यक्रम गर्न पाउँदा निक्कै हर्सित थियौं । अझै राजधानी नै बनाउने कुरा चल्दा दङ्ग पनि ।
मलाई कार्यक्रमको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिईएको थियो । देशैभरी बाट आएका अगुवा पत्रकार नेता र प्रदेशका साथीहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्दा मैले सबैको भाषण राम्रोसँग सुन्न पाईन । जतिको सुने राप्ती नदीको किनार,कृष्णसेन ईच्छुकको घर भालुवाङको निक्कै ठुलो महत्व रहेको अनुभुती गरें ।
कार्यक्रम सकिए लगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता, अग्रज पत्रकार सूर्य थापा र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले हामीलाई बधाई दिनुभयो । दुबै जनाको भनाई थियो यो कार्यक्रमको ऐतिहासिक महत्व रहनेछ । उहाँहरुले भन्न खोज्नु भएको कुरा मैले बुझिन अनि नेता सुर्य थापा लाई सुटुक्क सोधें त्यस्तो खासमा के भयो र सर ? मेरो प्रश्न सकिन नपाउँदै सूर्य थापाले भन्नुभयो, प्रदेश राजधानी बन्ने ठाउँ नै भालुवाङ हो । तिमिहरुले कार्यक्रम गरेर भालुवाङको बारेमा चर्चा चलायौ ।
उहाँको भनाइमा म सहमत हुन सकिन तर सुर्य जी को अगाडि बिरोध जनाउने हिम्मत पनि भएन, अनि होला र ? मात्र भने, उहाँले भालुवाङको पुल नजिकै उभिएर मलाई नोट गरेर राख भनी प्रेसर गर्नु भयो । म पनि हो भन्न बाध्य भएँ ।
सूर्य जी बोलीमा पक्का हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई बाल्यकाल देखि नै थाहा थियो तर यो कुरामा म पुर्ण रुपमा बिश्वस्त हुन सकिन । सायद सूर्य थापाको अलावा अरु कुनै नेताले मलाई त्यो कुरा भनेको भए मैले पटकपटक गफको तालमा हजुरको भालुवाङ राजधानी कहाँ पुग्यो भनेर गिज्याउने थिएँ । नेता थापालाई भन्ने साहस ममा भएन ।
समय अन्तर सँगै करीब ८, ९ महिना पहिले सबैको जित हुनेगरी बुटवल र कपिलवस्तु गोरुसिङे बीचको आसपास क्षेत्रमा सहमति गरी राजधानी राखौं भनी अर्घाखाँचीका प्रदेशसभा सदस्य चेतनारायण आचार्यले बताउँदा एक थरी बुटवलवाला नेताले उहाँको खेदो नै खने । उहाँको बिरुद्धमा तथानाम समाचार लेखाए । हामीले प्रतिवाद गर्न खोज्यौं तर आचार्यले घरको कुरा हो किन झगडा गर्ने साथिहरुले पछि संझनु हुन्छ चुप लाग भनेपछि हामी रोकियौं ।
अहिले समय फेरिएको छ । अब भालुवाङ प्रदेश राजधानी हुने कुरा करीब करीब टुंगिएको छ । सायद चेतनारायण आचार्यहरुले भनेको समयमा बुटवल बाहेक थोरै आसपासको ठाउँ लाई पनि स्वीकार्न सकेको भए स्थिति सहज थियो । सहमतिमै राजधानीको बिषय टुंगिने थियो । बुटवलका बाहेक अरु मान्छे नै होइनन् भन्ने मनोगत सोच भएकाहरुको एकोहोरो रटान र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अकर्मण्यताका कारण अब प्रदेश राजधानी भालुवाङ बन्नुको बिकल्प रहेन । प्रदेश सरकारले प्रस्ताव ल्याए पनि नेकपाका केहि सांसदहरूले बिकल्पमा छलफल गर्न जोडदार माग गरेका थिए । सरकार पनि सोच्न बाध्य बन्दै थियो । प्रतिपक्षी दलले यो कुरा बुझ्यो र आन्दोलनमा गएर राम्रै फाईदा पुग्ने ठान्यो । उसले कोरोना लाई पनि बिर्सिएर कार्यकर्ता सडकमा ल्यायो । उसका कार्यकर्ताले सडकमा टायर मात्र बालेनन् नेकपाका नेताहरूलाई लक्षित गर्दै उनीहरू सवार गाडिमा तोडफोड गरे । उनिहरुले स्वयं मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको गाडिको समेत सिसा फुटाए ।
कांग्रेसका सांसदहरूले प्रदेश सभाको बैठक चलिरहेको समयमा त्यहाँ भएका टेवल कुर्सी फुटाउने, माईक भाँच्ने जस्तो तान्डव नृत्य देखाए । यि सबै घट्नाक्रमले अब नेकपाका सबै सांसदहरूलाई एक ठाउँमा उभिन बाध्य पार्यो । उनिहरुले अब निर्णय गर्न जति ढिलो गर्नेछन् त्यति स्थिति अराजक र उदण्डतामा जानेछ ।स्थिति बिग्रदै जाँदाको परिणाम कल्पना बाहिरको पनि हुन सक्छ । हिजो बुटवल बाहिर ठाउँ नै छैन भन्दै टसमस नै हुन नखोज्दा भालुवाङ पुग्नुपर्ने अबस्था आएजस्तै अझै लफडा गर्दै जाने हो भने भोलि घोराही पुग्नुपर्ने अबस्था पनि आउन सक्छ ।
पन्थीको यो धारणा अर्घाखाँची डट कममा प्रकाशित छ
तीन हजार ४३९ जना थप भए
११ सय २६ घर गए